Enye yezingxoxo ze-Twitter esikujabulela kakhulu ukuhlanganyela kuzo Ukufinyelela kwe-Atomic #AtomicChat. Ingxoxo ekhiqizwe kahle, ehlelwe ngaphambilini ezungeze izihloko ezahlukahlukene zokumaketha ku-Twitter ezenzekayo njalo ngoMsombuluko ngo-9PM EST. Noma nini lapho ngibamba iqhaza, ngihlale ngihlatshwa umxhwele ukuthi i-Twitter ilunge kangakanani njengomthombo walo mcimbi.
I-infographic inikeza izeluleko ezinhle zokuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo i-Twitter yensizakalo yamakhasimende emicimbi, ukumaketha umcimbi wakho, ukuphatha isithunzi somcimbi wakho, ukuthola imininingwane, ukusiza ekuthengiseni, ukuzibandakanya ngesikhathi somcimbi, nokuthola impendulo yomcimbi. Ngicabanga nokuthi kuyindlela enhle yokusebenzisa i-tweeting bukhoma ukuthi kwenzakalani emcimbini! I-infographic ibuye inikeze izibalo (ama-69% abahleli Bemicimbi abasebenzisa i-Twitter ngemicimbi yabo!) Nezeluleko ezinhle ze-Twitter etiquette nemikhuba emihle.